Ogaden News Agency (ONA) – Mareykanka oo sheegay in aysan weerar ku aheyn Kuuriyada Waqooyi.
Mareykanka oo sheegay in aysan weerar ku aheyn Kuuriyada Waqooyi.
Posted by Wariye Qaran	/ September 27, 2017
War ka soo baxay Xukuumadda Washington ayaa lagu sheegay in Dowlada Mareykanka aysan duulaan ku ahayn xukumadda Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi.
Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanaka ayaa sheegay in Mareykanku uusan iclaaminin dagaal ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi,kadib markii ay cirka isku shareertay xisadaha dhanka diblomaasiyadeed iyo hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka hogaamiyaashooda ay warbaahinta isku waydaarsanayaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Waqooyiga Kuuriya Ri Yong Ho oo warbaahinta kula hadlay banaanka xarunta QM ee New yorka aya sheegay in mareykanku uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanka ah xukuumadda Pyonyang,waxaana hadalkan kasoo baxay aqalka Cad ayaa jawaab u ahaa warkaasi oo uu jeediayaya Wasiirka.
Madaxweynaha Mareykanka Donal Jey Trumpa ayaa qoraal uu soo dhigay bartiita Twitterka ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi aysan waxbadan sii jiridoonin hadii ay ku sii socoto dhabaha ay haatan hayso,taasi oo soo dedejisay hadalkan uu saxaafadda u jeediyay Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi.
Hogaamiyaha da’da yare e Kuuriyada Waqooyi Kim-Jon un ayaa u muuqda in uusan dheg jalaq u siinaynin hanjabaadaha Mareykanka,iyadoo taasi ay sii dheertaya xayiraadaha ay QM ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi.